I-Snowdrift. Yini, yakhiwa kanjani | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Lapho sikhuluma ngamaqhwa asezintabeni, akunakugwemeka ukuzwa izwi ukukhuphuka iqhwa. Izinguzunga zeqhwa zibaluleke kakhulu emhlabeni wonke, hhayi nje kuphela ngoba zigcina amanzi amaningi ahlanzekile, kodwa ngoba ziqinisa imvelo eminingi. Ama-snowdrifts yizindawo ezakheka ngaphakathi kwezinguzunga zeqhwa futhi zibalulekile ekulawuleni nasezimpawu zezinto ezungezile.
Kule ndatshana sizochaza ukuthi i-snowdrift iyini, yakhiwa kanjani nokuthi iyiphi enkulu kunazo zonke eSpain.
1 Kuyini ukushushuluza eqhweni?
2 I-Snowdrift ye-Countess
3 Ukunciphisa usayizi weqhwa leqhwa
Kuyini ukushushuluza eqhweni?
Cishe uke wezwa kaningi. I-snowdrift yindawo yentaba lapho kutholakala khona iqhwa elikhulu. Uma wake waya entabeni eneqhwa, uzobe usuyibonile indawo lapho kuneqhwa elinqwabelene kakhulu. Ngisho leli qhwa liyakwazi ukumelana namazinga okushisa aphakeme ngokungapheli futhi libe lapho ngisho nasehlobo.
Lokhu kungenxa yokuthi i-snowdrift yindawo evikelekile emisebenzini yesimo sezulu. Iziphepho zeqhwa ezenzeka neziphepho eziqhwaqhwa ebusika ziqongelela iqhwa kulezi zindawo. Ukuvikelwa kakhudlwana emoyeni, kusuka ku- imisebe yelanga nezinye izinto zemvelo, iyakwazi ukuhlala inqwabelene.
Ezinye izinto eziguquguqukayo ezinomthelela kubungako beziqhwa zeqhwa ukuqongelela iqhwa. Uma iqhwa selinqwabelene, lizohlala liqoqiwe isikhathi eside. Lokhu yikhona okwenza kube nokuzinza okuthile ezindaweni ezahlukahlukene zentaba ezijwayeza la mazinga okushisa, umswakama nokuba khona kweqhwa neqhwa.
Sithola ama-snowdrifts amakhulu futhi adume kakhulu njenge-Condesa glacier, etholakala eSierra de Guadarrama. Kwamanye amazwe afana ne-Argentina neChile basebenzisa leli gama ukubiza ezinye zezindawo zeqhwa lasePatagonia. Kunezindawo eziningi ezisezintabeni lapho iqhwa ligcinwa khona eduze komlomo wemifula noma eduze kwamachibi. Ukuncibilika njalo kweqhwa yikho okuphakela le mizimba yamanzi.
Le snowdrift eshiwo ngenhla idume impela. Itholakala eSierra de Guadarrama futhi ingamamitha angaba ngu-2.000 XNUMX ngaphezu kogu lolwandle. Le snowdrift iyasetshenziswa kwazise abantu basebenzisa iqhwa eligcinwa ehlobo. Ukuncibilika kwaleli qhwa kancane kancane unyaka wonke kwandisa ukugeleza koMfula iManzanares.
Le snowdrift ayihlanganisi nje kuphela iqhwa ngqo emvuleni, kodwa futhi nakulokho okuhanjiswa yiziphepho, imimoya neziphepho ezinkulu. Yindawo evikelekile eziqongweni lapho ungathola khona iqhwa eliningi elinqwabelene unyaka wonke.
Yayisetshenziswa kusukela ekuqaleni kwekhulu le-XNUMX kuya ngasekupheleni kwekhulu le-XNUMX ukuqoqa iqhwa. Iqhwa belithwalwa ngezinqola ezidonswa ngeminyuzi ziyiswa eMadrid nakwabanye omasipala. Iqhwa lalisetshenziselwa ukugcina ukudla kubanda nokuqabula iziphuzo ezithile. Khumbula ukuthi ngalesi sikhathi kwakungekho ziqandisi noma amafriji. Ngemuva kwalokho, iqhwa lemvelo elanqwabelana unyaka wonke lasetshenziselwa lezi zinhloso. Ukuze kukhuliswe ukusetshenziswa kwaleli qhwa, kwakhiwa udonga lwetshe engxenyeni engezansi, ukuze iqhwa liqoqeke kalula futhi ngobuningi obukhulu.
Le snowdrift ibaluleke kakhulu ebusweni beningizimu yeSierra de Guadarrama. Ubude bayo bungamamitha ayi-625 nobubanzi obungamamitha angama-80. Le ndawo yonke imbozwe yiqhwa unyaka wonke.
Ukunciphisa usayizi weqhwa leqhwa
Eminyakeni edlule, indawo yayo yonke ibincipha njengoba bekulindelekile. Ukwanda kwamazinga okushisa akhiqizwe ukwanda kwe- abamba ukushisa Kubangela iqhwa elincipha ukuba liqongelele ngezizathu ezahlukahlukene. Esokuqala ukuncipha kwezulu ngesimo seqhwa. Ngalokho, akukho moya noma izivunguvungu noma izivunguvungu ezingakwazi ukuthwala impahla engaka. Okwesibili ukwenyuka okujwayelekile kwamazinga okushisa unyaka wonke, okwenza kube nzima kakhulu ukugcina iqhwa.
Ngenxa yokuncibilika okwenzeka ehlobo, uMfula iManzanares unikezwa ngamanzi. Ngoncibilikile akusho ukuthi ukunqwabelana kweqhwa kuyanyamalala. Ngokuphambene nalokho, kumane kwehlise ivolumu yayo. "Umlingo" walezi zindawo ukuthi kuze kube sentwasahlobo, zisenenqwaba enkulu yeqhwa yokugcina.
Lokhu kunqwabelana kweqhwa kungenxa yamazinga okushisa aphakathi nendawo esiwathola unyaka wonke. Isilinganiso seqhwa leCondesa yi-5 degrees. Imvula ine-1400 mm ngonyaka, kugxila ingxenye yesithathu yayo ebusika. Ezinsukwini ezingama-365 ngonyaka, iqhwa livame ukuhlala izinsuku ezingama-250, okuyimpumelelo enkulu leyo.
Ngokuphathelene nohlaza lwayo, lujwayeza ukuba khona kweqhwa. Inotshani bezitshalo ezincane nobude obufushane. Imvamisa ziyaqhakaza lapho kuncibilika iqhwa bese zimboza kuze kufike ku-33% womhlabathi. Phakathi kwezimila ezivelele kulezi zindawo kukhona amajoragales namadlelo e-cervunal. Kukhona futhi nobunye ubulembu nezitshalo ezibusayo kodwa ngosayizi omncane.
Kanye nezigwedlo zeqhwa, ngokuqinisekile uzizwile nezinkundla zeqhwa. Le ndawo eneqhwa ibhekisela entweni efanayo ne-snowdrift. Lokho wukuthi, indawo engabanzi kakhulu yezintaba lapho iqhwa liqongelela khona ukubamba ngisho nasehlobo. Kuyinguzunga yeqhwa elincane le-cirque. Lezi zinkundla zeqhwa zigxile ezindaweni eziphakathi kwamamitha angu-2.500 3.000 no-XNUMX.
Kukhona nezikhathi lapho lezi zindawo zibizwa nge-helero. Kodwa-ke, kunokuthambekela okwengeziwe ukubizwa kanjalo lapho lokho okuqoqekayo kunguqhwa olwenzeka lapho ubusuku obubandayo emanzini ancibilikayo.
Njengoba ukwazi ukubona, imvelo inezindawo lapho okuvamile kungekho khona. Into ejwayelekile kunazo zonke ukuthi iqhwa liwa futhi liyancibilika ngemuva kwesikhashana, njengoba amazinga okushisa enyuka. Esimweni esinjalo, i-snowdrift iyakwazi ukuyiqongelela isikhathi eside.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » I-Snowdrift